यसपालिको भर्चुअल दशैं टीका कस्तो होला ? – Rapti Khabar
यो वर्ष दसैं मनाउने बहानामा सरकारले गाउँघर नजान आह्वान गरेको छ। कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपका कारण सरकारले जनतालाई आफू रहेकै स्थानमा बसेर दसैं मनाउन आग्रह गरेको हो। कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न जो जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यहीँ बसेर दसैं मनाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा पनि यो वर्ष अधिकांश नेपालीको दसैं हर्सोल्लासका साथ बित्ने छैन। यो खबर अन्नपुर्ण पोष्टमा निर्दोष घोरसाइनेले लेखेका छन् ।
कोभिडले नागरिकलाई घरमै थुनिन बाध्य पारेको छ। तर, यस्तो विकराल स्थितिमा प्रविधिले भने केही मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। भौतिक रुपमा उपस्थिति भएर दसैं मनाउन कठिन भए पनि प्रविधिले केही हदसम्म सहज बनाएको छ। धेरैको दसैं, भर्चुअल टीका, डिजिटल दक्षिणा हुने सम्भावना छ। भक्तपुर बालकोटका ७० वर्षीय कृष्णप्रसाद बञ्जाराले यो वर्ष छोरी ज्याईलाई भौतिक रुपमा दसैंका टीका लगाई दिने छैनन्। उनीहरूले प्रविधिको सहयोगमा दसैंको टीका लगाउने निर्णय गरेका छन्। ‘छोरी बिरामी छन्, बिरामी मान्छे बाहिर हिँडडुल गर्न खतरा छ’, बञ्जाराले भने, ‘भर्चुअल प्रविधिको सहयोगले छोरी ज्वाईलाई टीका लगाइदिन्छु।’
भौतिक रुपमा उपस्थिति भएर दसैं मनाउन कठिन भए पनि प्रविधिले केही हदसम्म सहज
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरका अनुसार यो वर्ष भर्चुअल प्रविधिमार्फत दसैंको टीका ग्रहण गर्दा उपयुक्त हुन्छ। ‘दसैंको आशीर्वाद मन्त्र (मुखले बोलेर दिने) हो। अहिलेको विकराल परिस्थितिमा सबैजना आफन्तमा गएर टीका थाप्न कठिन छ’, कुँवरले भने, ‘मानिसकै सहजताका लागि प्रविधिको विकास गरिएको हो।’ आफू र आफ्ना मान्यजनको स्वास्थ्य रक्षाका निम्ति प्रविधिको प्रयोगबाट दसैं मनाउन सकिने उनको भनाइ छ। अनुहार हेरेर कोभिड कसलाई छ, छैन थाहा पाउन सकिन्न। कोभिडबाट उच्च जोखिममा वृद्ध नै हुन्छन्। मान्यजनकै जीवन खतरा हुनेगरी दसैंको टीका थाप्न जानुभन्दा प्रविधिको प्रयोग उत्तम हुने उनको ठम्याइ छ। दसैंको दक्षिणा पनि प्रविधिकै माध्यमबाट दिन सकिने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि मोबाइल बैंकिङ, ई वालेटलगायत प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कोरोना कहरमा विद्युतीय कारोबारको दर र दायरा दुवै बढेको बताए। राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्टका सेवा प्रदायकलाई बजार विस्तारका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ। पछिल्लो सात महिनामा इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै आकर्षण मोबाइल बैंकिङमा देखिएको छ। नगद मात्रै कारोबार गर्ने उपभोक्ता पनि पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएका छन्। कोभिडका कारण ५० लाखभन्दा धेरै बैंक खाता खोलिएका छन्। नयाँ खाता खोल्ने धेरैले मोबाइल बैंकिङ लिएका छन्। यसले पनि विद्युतीय कारोबारमा आकर्षण बढेको हो। यो वर्ष राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि नयाँ नोट पनि जारी गरेन। टीका लगाउँदा प्रयोग हुने अविर यसमा दलिने हुँदा नोटको आयु कम हुने गरेको थियो।
ईकमर्स मेन्सफेसन नेपालका सीईओ लाक्पा शेर्पाका अनुसार पछिल्लो समय डिजिटल पेमेन्ट गर्ने ग्राहक बढेका छन्। ‘पहिला ग्राहकले अनलाइन सामान अर्डर गर्थे। तर, भुक्तानी भने नगद नै हुन्थ्यो’, शेर्पाले भने, ‘तर, अहिले भुक्तानी पनि अनलाइनमार्फत नै हुने गरेको छ।’
डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस प्रदायक पनि अहिले सेवा विस्तारमा लागेका छन्। ईसेवा, आईएमई पे, प्रभु पे, सेल पे, खल्तीलगाय सेवा प्रदायकहरूले दसैं अफर ल्याएका छन्। मोबाइल बैंकिङबाट पनि दसैंको दक्षिणा दिन र लिन सकिन्छ।
ईसेवाले उत्सवको बहार, हप्तैपिच्छे उपहार योजना अघि सारेको छ। ईसेवामार्फत भुक्तानी गर्दा मोटरसाइकलदेखि सपिङ भौचर, फुड भौचरलगायत विभिन्न उपहार जित्ने मौका प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रभु पेले दसैंमा नयाँ रजिस्ट्रेसन गर्नेलाई ३० रुपैयाँ र अरुलाई रिफर गर्दा पनि ३० रुपैयाँ दिने अफर अघि सारेको छ। त्यसबाहेक अनलाइन सपिङको पेमेन्ट गर्दा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। आईएमई पेले पनि दसैंमा रिचार्ज र खरिद बिक्रीमा छुट तथा क्यासब्याक अफर दिएको छ।
खल्तीले नेपाल टेलिकमको रिचार्ज गर्दा २ प्रतिशत क्यास ब्याक र १० प्रतिशत बोनस दिने योजना ल्याएको छ। सेल पेले पनि दसैंमा आफ्नो गेटवेबाट भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म्म क्यास ब्याकसहित योजना अघि सारेको छ।
खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित अग्रवालका अनुसार दसैंलाई बजार विस्तारको उपयुक्त समय भएको बताए। ‘कोरोना कहरले डिजिटल भुक्तानी गर्ने बढेका छन्। चाडपर्वको समयमा अन्य समयभन्दा धेरै कारोबार हुन्छ’, अग्रवालले भने, ‘नगदलाई भन्दा पनि डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिन पनि अफर ल्याइएको हो।’ साथै धेरैको यो वर्ष भर्चुअल टीका लगाउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा नगदमा दक्षिणा दिन सकिँदैन। त्यसको उत्कृष्ट विकल्प भनेको डिजिटल दक्षिणा हो। डिजिटल दक्षिणा दिने कुरालाई उपयोग गरेर बजार विस्तार गर्न सकिने अवसर भएको अग्रवालले बताए।